Sooyaalka aqoonta Caafimaadka iyo nolosha Sayniska: Q.2aad. - Diblomaasi
Israa’iil: Netanyahu wuxuu ka hadlay heshiis qirasho ah oo ku saabsan kiis musuqmaasuq
Ibrahim Boubacar Keïta: Madaxweynihii xilka laga tuuray ee Maali ayaa geeriyooday isagoo 76 jir ah
Ruushka ayaa laga yaabaa inuu xiriirka u jaro haddii Mareykanka uu cunaqabateyn saaro Putin – Kremlin
Wasiirada arrimaha dibadda ee Khaliijka Carabta ayaa ku wajahan magaalada Beijing ee dalka Shiinaha
Masuulkii ugu sareeyey ee Soomaali ah oo loo magacaabo lataliye sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka
Qeybtii ugu horeysay ee $200 milyan oo ah gargaarka difaaca Mareykanka ayaa soo gaaray Yukreeniya
Kuuriyada Koonfureed ayaa doonaysa in ay Imaaraatka ka iibiso gantaalada hawada laga rido oo qiimihiisu yahay balaayiin
Maraykanka iyo Ruushka ayaa laba jibaaray mowqifkooda ka dib markii ay wadahadallada ku fashilmeen
Washington ayaa sheegtay in aysan tixgelin doonin soo jeedinta Ruushka ee ah in la joojiyo ballaarinta NATO
Siyaasiga ugu awooda badan dalka Poland ayaa qirtay in wadankiisa iibsaday aaladaha basaaska ee NSO ee Israa’iil
Farmaajo iyo Riyadii ‘Qof iyo cod’
Boqolaal ayaa ku dhaawacantay, kuna dhintay duqeymaha Sacuudiga uu hoggaamiyo
Maxaa ka dhacay wadamada Khaliijka sanadka 2021?
Dagaalka Itoobiya: Itoobiya ma waxaa laga yabaa inay heshiiso?
Qaramada Midoobay oo ku dhawaaqday in Suudaan ay u qabanayso wadahadal lagu soo afjarayo qalalaasaha ka dhashay afgambigii dhicisoobay
Maxaad kala socotaa siyaasadda cusub Turkiga ee ku aadan qaaradda Afrika?
Colaadda Itoobiya iyo rajada dhexdhexaadinta labada dhinac
Waa maxay yoolka dhabta ah ee madaxweyne Macron ee ku aadan Afrika?
Waa maxay tayada maamulaha wanaagsan?
Qaabka cusub ee dhaqaalaha iyo mustaqbalka siyaasadda Turkiga
Ka maqnaanshaha Dowladaha Afrikaanka ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waa cadaalad darro weyn: Erdoğan
Waa qormooyinkii taxanaha ahaa ee cinwaankoodu ahaa: Sooyaalka aqoonta Caafimaadka iyo Nolosha Sayniska. Qormadii hore waxa aynu hadal haynay wax soo-saarkii garaadka ku dhisnaa ee qolyihii Hippocratiska la odhan jiray kusoo biiriyeen aqoonta Caafimaadka.
Qeybtii 1aad waxaad ka heli kartaa halkaan ee RIIX:
Arrinta kaalinta ugu weyn ay ka qaateen waxa weeye soo saaristii ahayd xeerkii loogu magac daray (Hippocratic Oath) oo loola jeedo xeerka hab dhaqanka tolmoon ee dhakhaatiirta [= Ethical code for doctors]. Xeerkani waxa uu ahaa sharci dabar adag u dhigay dhakhaatiirtii hunguriga iyo dhiig miiratada shacabka xilligaas kula qamaamay, qaar badan oo ka mid ahna ay kasoo horjeesteen. Mid ka mid ah xeerarkaas waxa ka mid ahaa:
Sidoo kale, qolyahani waa kuwii dhidibada u taagay fikradda xirfadda caafimaadka iyo barashada Sayniska caafimaadka (the idea of medical profession and the scientific study of Medicine). Ka sakow, guulihii wax-ku-oolka ahaa ee xaddaaradihii hore ee soo jireenka ahaa kusoo kordhiyeen caafimaadka, haddana waxa jirtay surma-seegtooyin ay la kulmeen mararka qaarkood. Bilmatal, xanuunada badankooda daweyntooda kuma ay wada guulaysan jirin. Ma ay haysan – suuxdin, kaar-jebin, iyo weliba dawooyinka dheyitaanka iyo nadiifinta loo adeegsado.
Dhanka kale, dadkii hore waxa ay ku wannaagsanaayeen daweynta jugta iyo nabarada waaweyn ee dhaawaca ku yimaadda [=Trauma] Sidoo kale jabniinka lafaha [=Fractures] iyo kala baxa is-goysyada [=Dislocations]. Ciidankii Rooman-ka (Roman Army) ee xilligaas dagaalada lagu riiqday ku jiray ayaa ahaa kuwii illaa laga soo gaadhayo qarnigii 19-aad, noqday qaar guulo la taaban karo ka gaadhay daweynta dhaawacyada, iyo goynta xubnaha qaarkood (Amputations).
‘Waxa uu qali jiray oo darsi jiray xubnaha xayawaanada mayeedhaanka ah si uu u ogaado qaab-dhismeedkooda.
Galen waxa uu ahaa ninkii beeniyay aragtidii ahayd in halbowlaha dhiigga tuura ay ku jirto hawo iyo naqas keliyaata. Aragtidaas waxa uu ku buriyay Erasistratus. Si uu u caddeeyo warkiisa waxa uu qalay doofaar (Pig) kaddibna tusay in halbowlaha dhiig qulqulayo. Sidoo kale xayawaanada uu qali jiray kaddibna baadhi jiray waxa kamid ahaa xayawaanka daanyeerka – weliba noociisa la yidhaahdo in uu aadanaha aad u shabbaho oo loo yaqaan (Barbary Apes).
Dharaarihii tagay, dhakhaatiirtii kal hore waxa ay baadhi jireen xayawaannada illaa uu soo baxay Andreas Vesalius oo ahaa dhakhtar u dhashay waddanka Biljamka, noqdayna qofkii u horreeyay ee si toos ah u jeex-jeexa meydka jidhka bini’aadamka. Waxaana lagu xasuustaa in uu yahay Aabbaha cilmiga ugubka ah ama casriga ee Anatomy-ga. (Founder of modern human Anatomy).
La soco qeybta 3aad
Related Topics:Sooyaalka aqoonta Caafimaadka iyo nolosha Sayniska: Q.2aad.
In ka badan toban dal, inta badan Yurub, ayaa joojiyey isticmaalka tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 cabsi laga qabo in tallaalka uu sabab u noqday qaatayaasha qaarkood inay yeeshaan xinjiro dhiig ah.
Walaac badan ayaa ka taagan warbixinnada laga soo sheegayo tallaalka AstraZeneca. Warbixinada ayaa sheegayaa in qofka marka la tallaalo waxaa lagu arkaa xinjiro dhiig ah, laakiin haayada caafimaadka adduunka ee WHO waxay ku boorineysaa waddamada inay sii wadaan isticmaalka tallaalka COVID-19.
Tallaalka cudurka Covid-19 ee ay soo wada saareen shirkadda AstraZeneca iyo Jaamacadda Oxford ayaa shalay magaalada Muqdisho laga dajiyay.
Wasiiro ay horkaceyso wasiirka caafimaadka, Fowsiyo Abiikar Nuur, ayaa garoonka ku guddoomay shixnadda tallaalka. Tallaalka wuxuu gaaraya ilaa 300,000 oo ah nooca Oxford-AstraZeneca si loo gaarsiiyo boqolkiiba 20 dadka ku nool Soomaaliya.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qaatay tallaalka Cudurka COVID-19 ayaa adkeeyey masuuliyadda adag ee shacab iyo dowladba inaga saaran samatabixinta caafimaad iyo nololeed ee dalkeenna. Madaxweynaha ayaa xoojiyey walwalka ku aaddan in ay yartahay feejignaanta shacabka Soomaaliyeed ee cudurkan iyo halistiisa sii kordheysa, iyadoo la fududeysanayo talooyinka iyo awaamirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabkeenna.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qaatay tallaalka Cudurka COVID-19
“Masuuliyad adag ayaa inaga saaran daryeelka muwaadiniinteenna si aan uga hortagno in uu soo rito cudurkan safmarka ah ee dunida aafeeyey. Muhiimadda ugu weyn waa in aan dadaal kasta gelinnaa ka hortagga cudurkan innaga oo xoojineyna tayada iyo adeegyadeenna caafimaad.” ayuu yiri madaxweyne Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Wasiirka Wasaaradda caafimaadka Xukuumadda federaalka ah Dr Fowsiya Abiikar Nuur ayaa Maanta noqotay qofkii ugu horeeyay ee qaata Talaalka Covid-19
Wasiirka Wasaaradda caafimaadka Xukuumadda federaalka ah Dr Fowsiya Abiikar Nuur ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee qaata Talaalka Covid-19 iyada oo ay wehliyaan Masuuliyiin ka socotay Wasaarada Caafimaadka, Gobolka Banaadir iyo Hay’ada Caafimaadka Aduunka si ay dadku ugu dhiiradaan qaadashada talaalka.
Sweden iyo Latvia ayaa Talaadadii noqday wadamadii ugu dambeeyay ee joojiya soo saarista, ka dibna waxaa joojiyey Jarmalka, Talyaaniga, Faransiiska, Spain, Denmark, Norway, iyo Netherlands, iyo kuwo kale.
Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa kulmaya Talaadada si ay dib ugu eegaan xogta badbaadada ee laga heli karo tallaalka, in kasta oo ay si isdaba joog ah kalsooni ugu muujisay ammaankeeda maalmihii la soo dhaafay; Madaxa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in ilaa iyo hada aysan jirin wax cadeyn ah oo ku saabsan dhibaatada uu leeyahay tallaalkaan.
In ka badan 17 milyan oo qof ayaa tallaalka ka helay Boqortooyada Ingiriiska iyo Midowga Yurub, iyada oo in ka yar 40 xaaladood oo xinjiro dhiig ah laga soo sheegay toddobaadkii la soo dhaafay, oo ah wadamo badan oo Ingiriis iyo Iswidish ah kamid yihiin.
Hay’adda dawooyinka Yurub (EMA), iyo jaangooyaha dawooyinka Yurub, ayaa kulmi doona Khamiista si ay uga wada hadlaan macluumaadka la ururiyey si loo go’aansado in tallaalku uu gacan ka geystey dhacdooyinka thromboembolic ee kuwa lagu tallaalay.
Hay’ada caafimaadka Iswiidhan ayaa 16-kii bishii Maarso hakisay isticmaalka tallaalka AstraZeneca oo ah tallaabo taxaddar ah.
“Wakaaladda Caafimaadka Dadweynaha ee Iswiidhan ayaa go’aansatay in ay joojiso isticmaalka tallaalka AstraZeneca ee loo yaqaan ‘covid-19’ illaa iyo inta laga gaarayo baaritaanka wakaaladda dawooyinka ee Yurub ee ku saabsan waxyaabaha looga shakisan yahay dhibaatooyinka soo raaca,” ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay hay’adda.
Wakaaladda Caafimaadka ee Iswidhishka ayaa sheegtay maalin ka hor in ay diiwaangelisay 10 xaaladood oo xinjiro dhiig ah iyo hal kiis oo heerar hooseeya oo ah dhiig-xinjiro ah oo ka dhex jira dadka qaatay tallaalka AstraZeneca, laakiin isugeyn maahan.
Wakaaladaha caafimaadka ee dowladda Latvia 16-kii Maarso waxay ku dhawaaqeen “hakad ku meel gaar ah” oo ilaa labo toddobaad ah.
Tallaabada waxaa loo qaaday “taxaddar dheeraad ah” inta tallaalka la baarayo, mana jiraan wax dhibaato ah oo lala xiriiriyay isticmaalkiisa Latvia, ayay wakaaladuhu ku sheegeen bayaan ay soo saareen.
Madaxweyne Emmanuel Macron wuxuu bishii Maarso 15 ku dhawaaqay in Faransiisku joojinayo isticmaalka tallaalka AstraZeneca inta laga helayo qiimeynta EMA ee tallaalka.
“Go’aanka ayaa la qaatay… in la joojiyo isticmaalka tallaalka AstraZeneca taxaddar ahaan, waxaan rajeyneynaa inaan si dhakhso leh dib ugu bilaabi karno haddii xukunka EMA uu oggolaado,” Macron ayaa ku sheegay shir jaraa’id.
Macron ma uusan faah faahin sababaha go’aanka laakiin wuxuu sheegay inuu rajeynayo in Faransiiska awoodi doona inay mar kale ku talaasho cirbadaha AstraZeneca.
Dowladda Jarmalka ayaa 15-kii Maarso sheegtay inay joojisay adeegsiga tallaalka AstraZeneca.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Jarmalka ayaa sheegtay in go’aanka loo qaatay si “taxaddar ah” iyo talobixinta xakameynta tallaalka qaranka ee Jarmalka, Machadka Paul Ehrlich, oo codsaday in baaritaan dheeri ah lagu sameeyo kiisaska.
Hay’ada dawooyinka ee dalka Talyaaniga bishii Maarso 15 waxay sheegtay inay kubiirtay wadamada kale ee Yurub ee kahortagaya isticmaalka tallaalka AstraZeneca.
Tallaabadan ayaa timid maalmo uun ka dib markii Taliska AIFA ee Talyaanigu mamnuucay adeegsiga hal dufcadood oo tallaal ah oo taxaddar ah halka ay adkaystay in aanu jirin xiriir la aasaasay oo la xiriira dhibaatooyinka soo raaca.
“AIFA waxay go’aansatay inay kordhiso xayiraadda isticmaalka tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 ee Talyaaniga oo dhan iyadoo taxaddar iyo ku-meel-gaar ah laga sugayo xukunnada Hay’adda Dawooyinka Yurub (EMA),” AIFA ayaa ku yiri hadal ay soo saartay.
Isbaanish-ka ayaa ku dhawaaqday 15-kii Maarso inay joojineyso isticmaalka tallaalka AstraZeneca ugu yaraan laba toddobaad si loogu oggolaado khubarada inay dib u eegaan amnigiisa.
“Waxaan go’aansanay inaan si ku meel gaar ah u joojino [isticmaalka tallaalka AstraZeneca] taxaddar ahaan,” Wasiirka Caafimaadka Carolina Darias ayaa u sheegay suxufiyiinta.
Luxembourg bishii Maarso 15 waxay sheegtay inay joojineyso isticmaalka tallaalka ‘AstraZeneca’ oo ah “tallaabo taxaddar leh” illaa laga helayo warbixinta EMA ee tallaalka.
Qubrus waxay ku dhawaaqday inay joojiso isticmaalka tallaalada AstraZeneca COVID-19 bishii Maarso 15 iyadoo laga sugayo dib u eegista EMA ee tallaalka.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in hakintaasi ay socon doonto illaa iyo 18-ka Maarso, markaasoo EMA ay soo saari doonto dib u eegis lagu sameynayo tallaalka ka dib warbixinno ku saabsan dhiig-baxa dhiigga ku dhaca ee ku dhaca qaatayaasha qaaradda Yurub qaarkood.
Boortaqiiska ayaa si kumeelgaar ah u hakiyay adeegsiga tallaalka AstraZeneca 15-kii Maarso kadib warbixinadii laxiriiray ay gaysteen waxyeelada halista ah.
Madaxa hay’adda caafimaadka DGS, Graca Freitas ayaa shir jaraa’id oo uu qabtay ku sheegay in inkasta oo dhibaatooyinka soo raaca ay “aad u daran yihiin”, ay yihiin “kuwo aad u dhif ah”, isagoo intaa ku daray in kiisaska noocaas ah aan weli laga soo sheegin Boortaqiiska.
Saraakiisha ayaa sheegay in ay rajeynayaan in dib u eegis cilmiyaysan oo ku saabsan tallaalka la soo afjari karo dhamaadka usbuuca.
Islofaaniya waxay ku dhawaaqday 15-kii Maarso inay ku biirayaan quruumaha kale ee Yurub joojinta isticmaalka tallaalka AstraZeneca.
Wasiirka caafimaadka Janez Poklukar ayaa sheegtay in dowlada ay go’aanka u qaadatay si “loo hubiyo heerka ugu sareeya ee suurtogalka ah” ee badbaadada.
“Ma jirto khibrad caafimaad oo qiil u siineysa joojintan” laakiin waa tallaabo ka hortag ah oo laga sugayo ra’yiga Hay’adda Daawooyinka Yurub (EMA), ayuu yiri.
Wasiirka caafimaadka ee Indooniisiya ayaa sheegay 15-ka Maarso in dalku dib u dhigi doono maamulka AstraZeneca ee COVID-19.
“Si aan ugu hortagno halista, hay’adda cuntada iyo daroogada ayaa daahisay hirgelinta AstraZeneca [tallaalka] maadaama ay sugeyso xaqiijinta WHO,” ayuu yiri Budi Gunadi Sadikin.
Indooniisiya ayaa heshay 1.1 milyan oo qiyaaso ah oo ah tallaalka AstraZeneca iyada oo loo marayo barnaamijka wadaagista tallaalka caalamiga ah ee COVAX bishaan waxaana lagu wadaa in ay hesho 10 milyan oo dheeraad ah labada bilood ee soo socota.
Nederland waxay aragtay 10 xaaladood oo xusid mudan oo waxyeelo xun leh, Hay’ad ilaalisa dawada Nederland ayaa tiri 15kii Maarso, saacado kadib markii dowlada joojisay talaalka.
Xarunta Farmashiistaha ee Lareb waxay sheegtey in dhacdooyinka la soo sheegey ay ka mid yihiin kiisaska suurogalnimada dhiig-karka ama shucaaca, laakiin midkoodna kuma jirin tiro platelet ah oo hoos loo dhigay, sida laga soo sheegey Denmark iyo Norway.
Tallaalka lama isticmaali doono ugu yaraan 29-ka Maarso taxaddar ahaan.
Ireland ayaa ku dhawaaqday 14-kii Maarso inay joojisay AstraZeneca “taxaddar fara badan darteed” kadib markii ay soo baxeen warbixinno ka yimid Norway oo sheegaya in dhiig halis ah uu xinjiroobayo dadka qaata qaarkood.
Guddiga La-talinta Tallaalka Qaranka ee Ireland (NIAC) ayaa ku taliyay joojinta inta laga helayo macluumaad dheeri ah EMA.
“Waxba ma noqon karaan, waxaa laga yaabaa inaan ka badbadino waxaanan si daacad ah u rajeynayaa in toddobaad gudihiis in nalagu eedeyn doono inaan taxaddar badan yeelanno,” ayuu yiri Ku Xigeenka Madaxa Caafimaadka Ronan Glynn.
Bulgaria bishii Maarso 12 waxay si ku meel gaar ah u joojisay AstraZeneca ka dib markii ay soo baxeen warar sheegaya in haweeney 57 jir ah ay dhimatay saacado ka dib markii la tallaalay.
Ra’iisel wasaare Boyko Borissov wuxuu sheegay in soo saarida AstraZeneca la hakin doono “ilaa inta shakiga oo dhan laga saarayo iyo inta khabiiradu aysan siinin wax dammaanad qaad ah oo aan khatar ku ahayn dadka”.
Haweeneyda ayaa la rumeysan yahay inay u dhimatay wadnaha oo istaaga; meydka lagama helin xinjiro dhiig.
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Koongo
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Koongo (DRC) ayaa ku dhawaaqday 12-kii Maarso inay dib u dhigeyso tallaalka AstraZeneca, iyadoo tixraaceysa dhaqdhaqaaqyada dalalka Yurub. DRC waxay heshay 1.7 milyan oo ah qiyaasta AstraZeneca iyadoo loo marayo qorshaha COVAX bishii Maarso 2 laakiin wali ma bilaabin barnaamijkeeda tallaalka.
Afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee DRC ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters “Waxaannu hubin doonnaa inaan wax badan ka ogaanno dhibaatadan.”
Thailand ayaa ahayd waddankii ugu horreeyay ee ka baxsan Yurub ee dib u dhigay tallaalka AstraZeneca, Maarso 12 – maalinta hoggaamiyeyaasheeda siyaasadeed ay ahayd in la siiyo tallaallada ugu horreeya. Hakinta ayaa ahayd mid kooban, hase yeeshe, Raiisel Wasaaraha Prayuth Chan-ocha wuxuu noqday qofkii ugu horeeyay ee Thailand ee qaata tallaalka Maarso 16.
Romaniya waxay si kumeelgaar ah u joojisay inay dadka ku tallaasho hal qeyb oo ah tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 – oo ah isla su’aasha laga qabo dalka Talyaaniga – bishii Maarso 11. Saraakiisha ayaa ku tilmaamay tallaabadaas “taxaddar xad dhaaf ah” illaa EMA ay dhameystireyso baaritaanka.
Iceland bishii Maarso 11 waxay hakisay tallaalkii tallaalka iyadoo sugeysay natiijada baaritaanka EMA.
Denmark ayaa 11kii Maarso ku dhawaaqday inay joojineyso isticmaalka tallaalka AstraZeneca muddo labo toddobaad ah, ka dib markii ay soo baxeen warar sheegaya in xinjirowga dhiigga ah laga helay dadka qaarkood ee la tallaalay. Wakaaladda daawooyinka ee deenishka ayaa markii dambe sheegtay in haweeney deenish ah oo 60 jir ah oo u dhimatay xinjirowga dhiigga ka dib markii ay qaadatay tallaalka ay leedahay calaamado “aan caadi ahayn”.
Haweeneydu waxay haysatay tiro yar oo ah unugyada dhiiga iyo xinjirooyinka maraakiibta yaryar iyo kuwa waaweyn, sidoo kale waxay leedahay dhiig bax, ayay tiri 14-kii Maarso. Dhowr kiis oo la mid ah ayaa laga helay Norwey iyo keydka EMA ee saameynaha daawada, ayay raacisay wakaaladda dawooyinka ee Danmark.
Norway waxay sidoo kale sheegtay inay joojineyso adeegsiga talaalka 11-kii bishii Maarso, iyadoo taxadar laga muujinayo iyadoo la soo sheegayo inay jiraan waxyeelooyin halis ah.
13-kii Maarso, saraakiisha caafimaadka ee Norwey waxay shaaca ka qaadeen in seddex shaqaale caafimaad ah – oo dhamaantood kayar 50 sano – oo dhawaan helay talaalka AstraZeneca lagu dabiibayo isbitaalka dhiig bax, xinjiro dhiig iyo tiro yar oo ah xinjirowga dhiiga.
“Ma naqaano in kiisaska lala xiriirinayo tallaalka,” ayuu yiri Sigurd Hortemo, oo ah dhakhtar sare oo ka tirsan Hay’adda Dawooyinka ee Norway.
Kahor intaanay Danmark iyo Norwey joojin joojintooda, Austria 7dii Maarso waxay joojisay isticmaalkeeda tiro kamid ah tallaalka AstraZeneca iyadoo la baarayo dhimashada cudurada xinjirowga ku dhaca iyo jirrooyinka sambabka.
Estonia, Latvia, Lithuania iyo Luxembourg ayaa sidoo kale joojiyay isticmaalka dufcadda ay Austria soo xushay.
Waa qormo ka kooban taariikh iyo tagto hore oo ku saabsan asalka aqoonta caafimaadka iyo nolosha Sayniska.
Had iyo goor ummadaha iyo xaddaarad kasta oo dunida soo martay waxa la isku raacay in marka tagtadda la darso ay tusmo iyo tusaalle u noqoto xayada maanta taagan.
Habka iyo hannaanka ay u farsamayn jirayn ummuuraha adduunyo ee soo wajaha – tabaha iyo tallaabooyinka ay u maarayn jirayn waa casharo u baahan in la darso. Haddaba innaga oo taas ka duulayna, waxa ay qormadeenna maanta ku lafo guri doonaa sida cinwaanka guud ka muuqata: Asalka aqoonta Caafimaadka iyo nolosha Sayniska (Origin of Medicine and Life science).
Ugu horrayn, dhammaan bulshooyinka kala geddisan ee caalamku mid kastaa waxa uu adeegsan jiray tab iyo xeelad ay ku furdaamin jireen xanuunada dadkooda soo rita, iyo waxa jiray hab ay u maarayn jireen dawooyinka jirrooyinkaas soo rita. Bilmtal, Soomaalidii hore waxa ay adeegsan jireen nooc daaweyn u gaar ah iyaga oo la ga falkiyay dhir iyo waxyaabo kale oo la isku daray – maadaama aqoonta Sayniska ee Casriga ah xilligaas deegaanadeenna ka jirin.
Waxa aynu ku bilaabi doonaa sebenadii hore sida Masaaridii hore iyo qolyihii Baabiloyooniska oo ahaa masdarka iyo isha ay kasoo farcameen ama kasoo burqan jireen badi aqoonta Sayniska iyo culuumta fanniga ah ee kala duwan. Inkasta oo qolyihii la odhan jiray Hippocratiska ay ahaayeen aasaasayaashii iyo aabayaashii Caafimaadka. Hippocrat waxa uu ahaa asal ahaan Giriig, waxaana lagu tilmaamaa Aabaha Caafimaadka (Father of Medicine).
Inkasta oo Masaaridu ka qadiimsan yihiin xaddaaradda Giriiga – [taas waxa caddayn kuugu filan – markii Giriigu booqday Masar, ayaa wadaad reer Masar ah ku yidhi: “idinku Giriig; waxa aad tihiin Dhallaan – taas oo ula jeedo – eegga ayaad caalamka xaddaaradda soo galaysaan”. Xilligaas oo qiyaastii ku beegnayd qarnigii 6-aad BC]. haddana Hippocratiska ayaa ahaa kuwii ugu horreeyay ee aaminay in xanuun kastaa leeyahay sabab dabiici ah.
Dhinaca kale Baabiloyooniska, iyaguna waxa ay sameyn jireen, kahor inta aanay wax daaweyn ah guda gelin, waxa ay eegi jireen nooca danbi ah ee uu galay ruuxa xanuunku ku dhacay, waxa ay rumaysnaayeen in ruuxa jirro ku dhacdo – Eebbe xanuun ciqaab uga dhigayo.
Sidaa daraaddeed Hippocratisku iyagu waxa ay isu arkayeen dhakhaatiir dhab ah oo raba in cudur kastaa leeyahay asal iyo sabab sayniseed (Proper science of Medicine).
Waxa ay isku dayeen in ay raadraacaan kiisas caafimaad oo kala duwan, waraysiyo ayay ka qaadeen bukaanadii, si ay u darsaan islaba roga xanuunka iyo qaabka uu ‘u fidayo. Xumadda (Fever), qaab- dhismeedka jidhka (Body posture), midabka maqaarka, heerkulka jidhka, indhaha, baadhitaanka candhuufta (Sputum), matagga (Vomit), saxarada iyo kaadida.
Arrimahan oo dhan waxa ay ka saacideen Giriigii hore in ay baadhitaan iyo daba gal rasmi ah ku sameeyaan xanuunada kala duwan. (Diagnosis and Prognosis).
Dabagalka iyo kasoo kabashada ama kasoo reyitaanka xanuunka qofka haleela ama in dhakhtarku ku guulaysto in ruuxu xanuunka ka bogsado waxa ay ahaan jirtay mid ka qayb qaadata sumcadda iyo karaamada dhakhtarku ku dhex leeyahay dadkiisa. Bilmatal, dhulkeenna dhakhtar kastaa waxa uu isku dayaa sida ugu dhakhsaha badan in uu isu dhaafiyo ruuxa bukaanka ah (dan kama laha bogsashadiisa toona) way se jiraan dhakhaatiir bukaanadooda daryeela.
Haddaba marka loo eego wadcigii iyo xaaladdii wagaas ay ku sugnaayeen xaddaaraddii Giriiga ee hore, qaabkii ay ula tacaali jireen xanuunada – ayaa haddana waxa aad la fajacaysaa agabka, aqoonta iyo qalabku sida uu gobaabsiga ugu ahaa iyo sida ay u maarayn jireen xanuuno badan oo halis iyo saf-mar ah.
Haddaba haddii aynu kusii socono aqoontii hore ee caafimaadka. Markan waxa aynu eegi doonaa Hippocratiskii hore iyo waxa ay ka aaminsanaayeen qaab-dhismeedka jidhka bini’aadmka. Waxa ay rummaysnaayeen in waaxyaha jidhka bini’aadamku ka kooban yahay afar shay oo loo yaqaan Humours: (Kulayl), (Qabow), (Qalayl), (Qoyaan). Hot, Cold, Wet, dry. Ama haddii si kale loo dhigo waa afar dareere: Black bile, Yellow bile, phlegm, iyo Blood.
Inkasta oo ay isku maandhaafsanaayeen waxa saxda ah ee jidhka bini’aadamku ka kooban yahay (Exact constitution of human body) haddana dhammaantood hal mid ayay ka sinnaayeen oo ah in haddii mid kamid dareerayaashan dheelli ku yimaaddo – jirraduna markaas bilaaban doonto. (Health was balance of the constituents, imbalance of constituents is the disease).
Wax fikrad ah kamay haysan waxyaabaha loo yaqaano Bakteeriyada, Fayraska, iyo in mararka qaar xanuunku qofka dibadda kaga iman karo oo kasoo weerar tegi karo.
La soco qeybta 2-aad ………..
By far the best general introductions to ancient science are G.E.R. Lloyd’s Early Greek Science to Aristotle (1970) and Greek Science after Aristotle (1973).
A little old, but still a useful introduction, is S. Sambursky, The Physical World of the Greeks (1956).
Philosophy and science were very much intertwined in the ancient world. A useful introduction to Greek philosophy is the Routledge History of Philosophy, vols 1 (1997) and 2 (1999), and a more extended introduction can be found in W.G.C. Guthrie’s History of Greek Philosophy in six volumes (1962–81).
The Cambridge Companions series is a useful way of finding out current thinking on various philosophers. While they concentrate on philosophy, there is always some useful material on ancient science as well. There are Cambridge Companions to Early Greek Philosophy, ed. D. Sedley (1999); Plato, ed. R. Kraut (1992); Aristotle, ed. J. Barnes (1995); and Hellenistic Philosophy (forthcoming).
Heerka dhimashada ee fayraska Nipah ayaa lagu qiyaasay 75% boqolkiiba, mana laha wax tallaal ah, halka ay dunidu diiradda saareyso Covid-19, balse saynisyahannada ayaa si adag uga shaqeynaya inuusan sabab u noqon dillaacitaanka xanuun kale oo safmar ah.
Waxay ahayd 3-dii January 2020, Supaporn Wacharapluesadee waxay sugeysay inay haweeney umuliso. Waxaa xilligaa baahay wararka sheegaya in cudur ku dhaca neefmareenka uu saameyn ku yeeshay dadka Wuhan, Shiinaha, waxaana soo dhowaa sannadka cusub ee Shiinaha. Dalxiisayaal badan oo Shiinees ah ayaa aaday dalka deriska la ah ee Thailand si ay ugu dabaal degaan.
Dowladda Thailand ayaa iyadoo taxadar muujineysa bilowday baaritaanka rakaabka ka imaanayay Wuhan, iyadoo sheybaarro yar oo uu ka mid yahay kan Wacharapluesadee – loo doortay in ay baaritaanka sameeyaan.
Wacharapluesadee waxay khabiir ku tahay fayrasyada. Waxay madax ka tahay xarunta caafimadka ee Bisha Cas ee magaalada Bangkok.
Tobankii sano ee la soo dhaafay, waxay qeyb ka ahayd hay’adda Predict, oo ah dadaal caalami ah oo wax looga qabanayo xakameynta cudurrada ka soo gudbi kara xayawaanka una gudbi kara bani’aadamka. Iyada iyo kooxdeeda waxay baaritaan ku sameeyeen xayawaanno badan. Balse diiradda koowaad waxaa la saarayay noolaha fiidmeerta ama kibiliga, oo lagu yaqaanno inuu sababo noocyo badan oo ka mid ah coronavirus.
Kooxdan seynisyahannada waxay awoodeen in ay cudurka ku ogaadaan maalmod gudahood, waxayna garteen kiiskii ugu horreeyay ee Covid-19 ee laga helo meel ka baxsan Shiinaha. Waxay heleen in fayraskaas lala xiriirin karo nnoocyada coronavirus ee ay hore uga heleen fiidmeerta. Dowladda ayaa warbixintaas goor hore la helay darteed waxay u suurtagelisay in ay degdeg u karantiisho bukaannada ayna u digto muwaadiniinta.
Dalka Thailand waxaa ku nool illaa 70 milyan oo qof, 3-dii January 2021 wuxuu diwaan geliyay 8,955 oo kiis iyo 65 dhimasho ah.
Balse iyadoo ay dunida ay la daalaa dhacayso Covid-19, Wacharapluesadee waxay ku howlan tahay xanuunka safmarka ah ee xiga. Qaaradda Aasiya waxaa ka jira cudurro badan oo faafa. Bulshada sii badaneysa iyo is dhexgalka dadka iyo xayawaannada duurjoogta ah ee dalalka qaaraddaas ayaa khatarta ugu badan sababaya.
Intii ay baaritaanka wadeen, kumannaan fiidmeer, ayay Wacharapluesadee iyo kooxdeeda ogaadeen in ay sababaan noocyo fayrasyo ah. Waxay inta badan ka heleen fayrasyada Korona, balse sidoo kale waxay ka heleen cudurro kale oo dilaa ah oo ku dhici kara bani’aadanka.
Waxaa ka mid ah fayraska Nipah. Waxaa inta badan laga helaa noolaha kibiliga. “Waa walaac weyn, sababtoo ah ma jirto dawo… heerka dhimashada ee fayraskana way sarreysaa,” ayay tiri Wacharapluesadee. Heerka dhimashada Nipah wuxuu u dhaxeeyaa 40% ilaa 75%, iyadoo ay ku xiran tahay halka uu ka dillaaco fayraska.
Waxaa jira sababo dhowr ah oo fayraska Nipah lagu tilmaami karo inuu yahay mid halis ah. Waxaa jirta in fayraska uu jirka qofka ku negaan karo muddo 45 maalmood ah, taas oo suurto gelineysa in qofku sii gudbiyo isagoo aan ogeyn inuu xanuunsan yahay.
Wuxuu ku dhici karaa xayawaannoo badan, taas oo suurto gelineysa inuu sii faafo. Sidoo kale waxaa lagu kala qaadi karaa taabasho si toos ah amaba cunitaanka cunto fayrasku ku jiro. Qofka qaba fayraska Nipah wuxuu isku arki karaa calaamadaha neefmareenka sida qufac, dhuunta oo xanuunta iyo daal, maskaxda oo bararta taas oo sababi karta dhimasho.
In laga fogaado fiidmeerta way fududaan lahayd, balse iyadoo ay bulshadu sii kordheyso, dadka waxay beddelayaan dhulka iyagoo burburinaya deegaannada duurjoogta iyo noolaha kale ay ku sugan yihiin, taas oo sababeysa faafitaanka cudurrada.
Boqolkiiba 60% bulshada adduunka waxay ku nooshahay Qaaradda Aasiya iyo gobollada Baasiifigga, waxaana socota magaaleyn iyo deegaameyn baaxad wayn. Sida laga soo xigtay Bankiga Adduunka, ilaa 200 oo milyan oo qof ayaa u guuray magaalooyinka Bariga Aasiya intii u dhaxaysay 2000 iyo 2010.
Burburinta hoyga fiidmeerta ayaa markii hore sababay faafitaanka fayraska Nipah.
Sanadkii 1998, fayraska Nipah oo ka dillaacay Malaysia ayaa dilay in ka badan 100 qof. Baarayaasha waxay sheegeen in dabka ka kaca keymaha iyo abaaraha ay kibiliga ama fiidmeerta ka saareen hoygooda kuna qasbeen in ay deegaameystaan geedaha miraha la cuno ay ka baxaan.
Weligaa ma isku dayday inaad hagaajiso tamar la’aanta ku haysato adigoo waliba hurdo badan seexanaya ayaad hadana dareentaa wali daal?
Haddii jawaabtaadu tahay Haa, waa tan sirtu: Hurdo iyo nasasho isku mid ma aha, in kastoo in badan oo naga mid ahi si khaldan ugu jahwareeraan.
Marka hore aan isla garano waxa ay tahay hurdo la’aanta, marwalbo hurdada waa muhiim kuna dedaal inaad hurado hurdo kugu filan habeen walbo. Hurdo la’aantu waxay ka timid dhibaatooyinka la xiriiro hurdada, waxaana lagu gartaa in qofka oo hurdo ku soo dhici karin ama hurdada ku raagi karin.
Dadka qaar oo ka sheegto hurdo xumada waxay kaloo dareemaan daal iyo tabardarri markii ay soo toosaan subaxii ama haddii ay ka soo toosaan habeenkii kuma laaban karaan ama waqti hore oo qofka hurdada ka dhamaato.
Badanaa hurdo la’aanta soo boodada ah wax daawo ah looma qaato, qofka wuu helaa hurdo markii ay ka gudbaan waxyaabaha uu dhibsanayo. Haddii aad ka welwelsan tahay in hurdo la’aantu ay saameyn ku yeelato shaqadaada ama waxbarashadaada waa in aad dhakhtar la xiriirta si laguugu caawiyo wax hurdo ku siiyo.
Inta badan waxaanu u haysanaa inaan nasanay haddii aan helnay hurdo nagu filan – waa sax laakiin sheekada sida aad mooday ma ahan. Dhab ahaantii waxaa naga maqan inaan ogaano noocyada kale nasashada ee aan aadka ugu baahannahay.
Waxaa macquul ah, inaad isku aragto daal joogto ah iyo in muuqaal ahaan aad u ekaato qof gubtay. Sababtaas ayaa ah, waxaan la dhibtooneynaa nasasho la’aan sababtoo ah ma fahmin awoodda dhabta ah ee nasashada.
Nasashada waa inay u dhigantaa dib u soo celinta toddobadan qaybood ee muhiimka u ah noloshaada.
Nooca ugu horeeya ee nasashada ee aan u baahanahay waa nasasho jireed, oo noqon karta mid dhaqaaq ama firfircooni.
Nasashada jireed ee jiifka ah waxaa ka mid ah hurdo iyo seexasho, halka nasashada jireed ee firfircoon macnaheedu yahay waxqabadyada dib u soo celinta sida gym-ka, fidinta iyo daaweynta duugista oo gacan ka geysaneysa hagaajinta wareegga jirka iyo dabacsanaanta.
Waa muhiim in aan daryeel wanaagsan siino nasashada jirka, dib u dhiska jirka iyo maskaxda. Markii aan ku dadaalno jir ahaan ama maskax ahaanba, waxaa xoogsanaysa soo celinta tamarteena. Baarayaasha waxay muujiyeen in culeyska jirka ee shaqada gacanta iyo xitaa culeyska shucuureed ee shaqada miiska ay u baahan yihiin nasasho si jirka iyo maskaxdu u soo kabtaan.
Nooca labaad ee nasashada waa nasashada maskaxda.
Markuu qofka seexdo habeenkii si uu u nasto, wuxuu si joogto ah ugu halgamayaa inuu damiyo maskaxdiisa iyadoo sheekooyinka maalinta laga bilaabo ay buuxinayaan maskaxdiisa. In kasta oo uu seexdo toddobo ilaa siddeed saacadood, haddana wuxuu ku soo toosaa isagoo dareemaya sidii inuusan weligii aan seexan.
Waa muhiim in maskaxdaada ay u noqoto mid nasatay, waxaad u baahan tahay inaad fasax yar qaadato oo aad shaqada ka yar nasato. Jadwal u samee nasashooyin gaagaaban labadii saacadoodba mar inta lagu jiro maalmahaaga shaqada:, nasashooyinkani waxay kuu suurta galin kartaa in maskaxdaada ay nasato oo ay gaabiso shaqada badan ee ay wado. Sidoo kale, haddii aad tahay qof xaalado adag ku jira waxaad sameysaa tag meel hawo fiican aad ku qaadan karto, qor dhammaan culeysyada ku haysto iyo sida aad ugu gudbi karto.
Nooca saddexaad ee nasashada ah ee aan u baahanahay waa nasasho dareen leh.
Nalalka dhalaalaya, shaashada kumbuyuutarka, buuqa asalka ah iyo wada sheekaysiga badan – ama ha joogaan xafiis ama wicitaannada Zoom – waxay sababi karaan in dareenkeenna uu dareemo culays badan. Waxaana looga hortegi karaa in aad sameyso daqiiqad aad indhaha xerato bartamaha maalin walbo.
Indhaha waxay ka mid yihiin xubnaha jirka ugu qaalisan. Dad badan ayaa ka sheegta indho xanuunka mararka qaarkooda waxaa la socda madax xanuun. Xanuunka isha waa noocyo badan yihiin waxaa jira xanuun gudaha indhaha, sidoo kale dhafarka iyo shaahada telefonada iyo kombuutarada waxay keeni karaan daal badan, sidaas awgeed waa muhiim inaad sameyso qodobka aan kor kusoo sheegnay.
Ogaysiis: Isticmaalka komburada iyo guud ahaan qalabka elektroniga ee shaashadaha leh waxay qatar ku noqon karaan indhahaaga haddii aan loo isticmaalin si taxader leh.
Nooca afraad ee nasashada waa nasasho hal abuurnimo leh.
Nasashada noocan ahi waxay si gaar ah muhiim ugu tahay qof kasta oo ay tahay inuu xalliyo dhibaatooyinka. Nasashada hal-abuurka ah waxay dib u soo nooleysaa baqdinta iyo yaabka ku jira qof kasta oo inaga mid ah. Ma xasuusataa markii ugu horreysay ee aad aragto badda ama biyo-dhaca?
U oggolow naftaada inaad wakhti ku qaadato daawashada quruxda banaanka – xitaa haddii ay tahay jardiinada deegaanka ama daaraddaada – waxay ku siinaysaa nasasho hal abuur leh.
Laakiin nasashada hal-abuurka ah si fudud looguma mahadnaqin; sidoo kale waxaa ka mid ah ku raaxeysiga fanka. Goobtaada shaqada u rog meel dhiirigelin leh adigoo soo bandhigaya sawirada meelaha aad jeceshahay iyo shaqooyinka farshaxanka ee kula hadlaya. Ma qaadan kartid 40 saacadood usbuucii adoo fiirinaya hareeraha ama meelaha lagu buuqsan yahay oo aad fileyso inaad dareento xiisaha wax kasta, adiga ayaa la imaan kara fikrado cusub
Qof walbo inta uu nool yahay wuxuu la kulmaa qof wanaagsan uu saaxib ka dhigto. Waa qofka ay qof waliba ku tiirsan tahay, midka aad u wici lahayd haddii aad u baahan tahay raalli ahaansho maxaa yeelay xitaa haddii aysan rabin inay sameeyaan, waxaad ogtahay inay ku siin doonaan diidmo “haa” halkii ay run ka sheegi lahaayeen “maya”.
Saaxiibka wanaagsani waxa uu qofka u leeyahay muhiimad ballaaran iyada oo shareecada islaamku qofka muslimka ah ku boorisay in uu samaysto saaxiib wanaagsan oo ay xaqqa isku garabsadaan xumahana isaga gaashaantaan. Sidaas awgeed, waxaad u baahan tahay saaxiib wanaagsan oo aad ku nasato, si dareenkaaga u wanaagsanaado.
Waxaad u baahan tahay nasasho shucuur ah, taas oo macnaheedu yahay inaad haysato waqti iyo meel aad si xor ah ugu muujiso dareenkaaga farxada. Nasashada shucuurta sidoo kale waxay u baahan tahay geesinimo si ay u noqoto mid dhab ah. Qof dareen ahaan nasasho leh ayaa ka jawaabi kara su’aasha ah “Sidee tahay maanta?” run isugu jawaabi kara “Ma fiicani” – ka dibna sii wad adigoo ka jawaabaya su’aalaha adag.
Hadalkii oo kooban ”Haddii aad u baahan tahay nasasho shucuureed, waxaad u badan tahay inaad leedahay nasasho bulsheed”. Si aad ula kulanto nasasho bulsheed oo dheeri ah, naftaada ku xeero dad wanaagsan oo ku taageera. Xitaa haddii isdhexgalkaagu aan fiicnayn ama aadan ka helin inaad la fadhiisato dadka qaarkiisa madamaa waxaad diiradda saaraysaa cidda aad la hadlayso ama aad la fadhiisanayso.
Isticmaalka telefoonnada casriga ah iyo caafimaadka bulshada
Dadka isticmaala Taleefoonada gacanta iyaga oo socda waddooyiinka, waxay la kulmaan shilal keeni kara in jirkooda uu dhaawac soo gaaro. Sida ay sheegeen dhaqaatiirta, dhibaatooyiinka sare u kacday waxaa ka mid ah dadka Sanka ka jabay, kuwa ay ilkaha ka daateen iyo waliba dhaawac dhanka maskaxda ah.
Dr Boris ayaa intaa ku daray in cilmi-baarista ay sameeyeen ay muujinayso in sannadkii 1998 illaa 2006-dii ay aad u yareyd tirada dadka ay soo gaartay waxyeelada la xiriirta Teefoonnada gacanta. Balse waxa uu sheegay in tiradaasi ay aad sare ugu kacday laga soo bilaabo 2007-dii ilaa 2009-kii. Sannadba sannadka ka dambeeyana “sare ayey u sii keceysay”, sida uu sheegay dhakhatarkan.
Ku dhowaad afar-meelood, meel ka mid ah dhallinyarada caalamka waxay ku tiirsan yihiin telefoonada casriga ah, taas oo noqotay wax ay qabatimaan, sida lagu ogaaday cilmi baaris ay sameeyeen dhaqaatiir ku taqasustay cilmu-nafsiga. Cilmi barista oo uu hoggaminayay machadka King’s College ee London, waxaa lagu sheegay in dabeecadaha qabatinka leh ay sababeen in dhallinta ay “argagaxaan” marka laga qaado mobile-ka.
Sidoo kale, da’yartan naftooda kama xakameyn karaan waqtiga ay ku bixiyaan isticmaalka telefoonka casriga ah. Dhaqaatiirta waxay ka digayaan in qabatinka noocaas ah uu yeelan karo “cawaaqib aad u xun” oo ah in uu dhibaato u geysan karo caafimaadka maskaxda.
Diblomaasiyadda & Dunidda22 mins ago
Norway waxa ay sheegtay in ay Taalibaan u gudbinayso ‘dalab la taaban karo’
Sirdoonka & Militariga3 days ago
Bariga dhexe3 days ago
Diblomaasiyadda & Dunidda1 week ago
Siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sanadkaan 2022 ku billaabaysa si xawli ah
Sirdoonka & Militariga1 week ago
WARBAAHINTA1 week ago
Wasiirada arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock ayaa booqatay Ukraine iyadoo ay sii kordheyso xiisadda kala dhexeysa Ruushka
Dhaqaalaha iyo Siyaasadda1 week ago
Shiinaha iyo Iiraan ayaa bilaabay heshiis iskaashi iyadoo ay wajahayaan cunaqabateynta Mareykanka
Maamulka Ganacsiga & Suuqgeynta2 weeks ago
WARBAAHINTA2 weeks ago
Sirdoonka & Militariga2 weeks ago
Afrika2 weeks ago
Gumeysi iyo isir sifeyn2 weeks ago
Xorriyadda Gaajada: Doorka gaajada ee halganka Falastiiniyiinta
164 ayaa ku dhintay, ku dhawaad 6,000 ayaa lagu xiray qalalaasaha Kazakhstan
WARBAAHINTA3 weeks ago
J.K. Rowling ayaa lagu eedeeyay sawir ‘ka soo horjeeda Yuhuudda’ ee Harry Potter
Xoghayaha guud ee gaashaanbuurta NATO oo kulan gaar ah la yeelanaya Ruushka oo ku saabsan xiisadda Ukraine
Sirdoonka & Militariga3 weeks ago
Warbixin: Hay’adda Sirdoonka Israa’iil ee Mossad ayaa bartilmaameedsatay shirkado Jarmal, Swiss ah – Ujeedada waa maxay?
Qoyska & Horumarinta Bulshada3 weeks ago
Bangiyadda & Keydka3 weeks ago
Bariga dhexe4 weeks ago
Waa maxay sababta Madaxweyne Joe Biden uu ugu baahan yahay inuu badbaadiyo heshiiska nukliyeerka Iiraan?
Islaam Naceybka1 month ago
Dowladda Faransiiska oo khatar weyn ku haysa Xorriyadda Muslimiinta
Bog cusub oo u bilaabmay xiriirka Turkiga iyo Imaaraadka: Maxaa wakhtigaan kusoo aadiyey?
Bariga dhexe2 months ago
Yurub3 months ago
Dhaqaalaha iyo Siyaasadda3 months ago